အဆိုပါချစ်ပ်သို့မဟုတ်အသားပေါ်3ငံပြာရည် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကျွန်မအထူးသဖြင့်ထိုသုံးနဲ့တူရေစာဝက်အူချောင်း၏အမျိုးမျိုးအနက်။ အမြဲတမ်းအသား, ကြက်သား, အိမ်လုပ်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူချစ်ပ်, makaroshkam, pita မုန့်အတွက်သရေစာနဲ့ပိုပြီးသူတို့ကိုအချို့ကိုပြင်ဆင်လော့။
အမှန်မှာထိုသူတို့မဆုံးရှုံး! သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးပါ, ရှယ်ယာချက်ပြုတ်နည်းများတန်ဖိုးရှိ။
Gourmet French Sauce သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ယူထားသော Mayonnaise များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအစားထိုးဖြစ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းတို့သည်သုပ်တစ်သင်းလုံးအရသာကိုမြည်းစမ်းနိုင်ပြီး၊
100 ml ကို gribisha ပါဝင်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ထားရန်:
ပြုတ်ကြက်ဥ -2အပိုင်းပိုင်း;
ချဉ် gherkins -5အပိုင်းပိုင်း;
ချဉ် capers (optional) - 1 အနုပညာ။ ဌ;
ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်သံလွင်ဆီ -5အနုပညာ။ ဌ;
အဆင်သင့်မုန်ညင်း - 1 အနုပညာ။ ဌ;
ရှလကာရည် ဝိုင် - 1 အနုပညာ။ ဌ အဖြူ
ငရုတ်ကောင်း, ဆား, ဆန္ဒရှိလျှင်, လိုအပ်လျှင်အရသာ။
မှိုငံပြာရည်အောင် - စာရွက်
1 ။ ကြက်ဥအခွံနှင့်ပြုတ်ကြက်ဥအနှစ်တစ်ပန်းကန်၌ထားတော်မူ၏။ သူတို့ကိုရန်မုန်ညင်း Add နှင့်ဂရုတစိုက် - လမ်းဆုံလမ်းခွ - အသော့ပွငျ, တဖြည်းဖြည်းရေနံဖြည့်စွက်။
2 ။ ထို့အပြင်ငံပြာရည်များအတွက်စာရွက်အရ - ထုတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရောအနှော, ထို့နောက် gherkins သို့ခုတ်။
3 ။ ကြက်ဥရှဥ့်များကိုကြိတ်ထားသောကြက်ဥအသားကြိတ်ပြီးလျှင်ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်ကာနံ့သာမျိုးနှင့်ရောစပ်ပါ။ အဆုံးမှာအဖြူထည့်ပါ စပျစ်ရည်ကိုရှာလကာရည် နောက်ဆုံးရောမွှေပါ။
4 ။ Gribish အံ့သြစရာငံပြာရည်အဆင်သင့်ပါ! ကရေခဲသေတ္တာထဲမှာကလေးအစားအစာတစ်ခုဖန်အိုးတလုံးထဲမှာဖြစ်နိုင်သည်ထားပါ။
Guacamole - ထောပတ်သီးက yummy ပါ
မှည့်သောထောပတ်သီးများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောရှေးခယျြဖို့ guacamole ညာဘက်သည်။ ခက် (unripe) အသီးအဖြစ်ည့် (မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်) အသီး - မရကောင်းသော!
50-60 ml ကိုငံပြာရည် guacamole များအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ:
1 ဖြစ်တော့။ ဆား;
Guacamole ဟင်းချက်ခြင်း - စာရွက်
1 ။ အဆိုပါထောပတ်သီးလျှော်အစိုဓာတ်ကိုအထည်သုတ်။ တန်းတူရှက်သို့ - တစ်လျှောက်တွင်အသီးဖြတ်ဖို့တစ်ဦးချွန်ထက်သောဓါးအတူ။ အရိုး Pull ။
2 ။ ငံပြာရည်စာရွက်ပေါ် Next ကိုအခွံလက်ဖက်ရည်ဇွန်းထံမှထက်တောင်ဦး -myakot ။ podbavlyaya ထုံးဖျော်ရည်နှင့်ဆားမြည်းစမ်းဖို့စဉ်တစ်ခက်ရင်းခွသို့မဟုတ် spatula တင်းကျပ်နှင့်အတူငံပြာရည်၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုမှကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။
3 ။ သငျသညျပေးနှင့်ပြင်းထန်မှုပေမယ့်ငရုတ်ကောင်းရိုးရှင်းစွာ guacamole ၏သဘာဝအရသာဂိုးသွင်းနိုင်မမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
4 ။ ကပြီးပြည့်စုံသောငါးနှင့်အသားဟင်းလျာများမှအဖြည့်အဖြစ် paprika နှင့်အတူအာလူးကြော်သို့မဟုတ်ဒိန်ခဲညာဘက်ဖြစ်သင့်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
Guacamole - ဗီဒီယိုနှင့်ဂန္ထဝင်စာရွက်
ပင်စိမ်းနှင့်အတူခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် - စာရွက်
150 ml ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများခုနှစ်တွင်:
ကြီးမားတဲ့ခရမ်းချဉ်သီး, အနီရောင်စပျစ်သီး -3အပိုင်းပိုင်း;
ရေနံသံလွင်။ - 25 ml ကို;
ကြက်သွန်ဖြူ - 1 သွား;
ပင်စိမ်းအစိမ်းရောင်။ -2vetoch;
အခြောက်လှန်း oregano -2ဖြစ်တော့;
သကြား, ဆား, ငရုတ်ကောင်း - အနည်းငယ်, အရသာအရသိရသည်။
အဘိတ် (12-15 မိနစ်):
1 ။ ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူခွံချွတ်ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးတော့မတရားဖမ်းဆီးဟင်းသီးဟင်းရွက်များလှီးဖြတ်, ဒါပေမယ့်လည်း krupnovat မဟုတ်ပါဘူး။
2 ။ တစ်ဦး skillet အတွက်ရေနံအပူပေးပြီးခရမ်းချဉ်သီးကိုတင်ထားရမည်။ ခရမ်းချဉ်သီး4မိနစ်မျှတည်ထားပါ, သူတို့ကအတော်လေးပျော့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သီးဖျော်ရည်ကိုလုံးဝနီးပါးအငွေ့ပြန်မှီတိုင်အောင်, ရံဖန်ရံခါနှိုးဆော်။
3 ။ ထို့အပြင်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက်စာရွက်အရသကြားနှင့်ရာသီများထည့်သွင်းခြင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူကြိတ်ခြင်းနှင့်အလယ်အလတ်ပိုင်းခွဲထားသောပင်စိမ်းများကိုထည့်ပါ။ ပြီနောက်ဟင်းကိုဖုံးကာငံပြာရည်ကိုပြုတ်ပါ - 1-2 မိနစ်။
4 ။ Post ကို ostyvshim - ထိုမီးခဲသို့မဟုတ်ကင်ပေါ်မှာအသား, အရသာနှင့်အတူအာလူး, risotto, ဆန်, ခေါက်ဆွဲ။ အရသာအပြည့်အဝ - တစ်ကြက်သား!
လတ်ဆတ်သောခရမ်းချဉ်သီးပင်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် - စာရွက်
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,268 စက္ကန့်ကျော် Generate ။